KDE, Gnome, Xfce, LXDE iyo ra'yigayga iyaga ku saabsan. | Laga soo bilaabo Linux
KDE, Gnome, Xfce, LXDE iyo ra'yigayga iyaga ku saabsan.
Alexander (aka KZKG ^ Gaara) | | Muuqaal / Shakhsiyeyn, GNU / Linux, Kuwa kale
Miisaska kumbuyuutarrada, sida qaybinta, waxay fuliyaan ujeedadooda iyadoo loo eegayo baahiyaheena aasaasiga ah iyo isticmaalka aan siinno kombiyuutarka, iyo waqtigan, waxaan u maleynayaa dhammaantood (Ama aqlabiyada) Waan ognahay waxa mid kasta oo ka mid ahi bixin karo.
Waxaan doonayaa inaan fursad helo. Aniga, isticmaale isku dayay ku dhowaad dhammaan miisaska kumbuyuutarrada laga heli karo GNU / Linux, Waxaan u maleynayaa inay jiraan 4 waaweyn ama kuwa ugu muhiimsan hada, mid walbana waxaan u qeexi lahaa sidan:
1 KDE: Qalabka ugu dhameystiran uguna wax soo saarka badan GNU / Linux.
2 Gnome: Boqorka oo aan lahayn carshi.
3 Xfce: Beddelka Gnome 2
4 LXDE: Kuwa ugu yar, ugu dhaqsiyaha badan laakiin ugu awoodda yar fasalka
KDE: Qalabka ugu dhameystiran uguna wax soo saarka badan GNU / Linux.
Laga soo bilaabo barta ah in "kan ugu fiican" ay kuxirantahay dhadhanka iyo baahida mid kasta, ma aha wax qarsoodi ah qofna in dhibkeeda iyo dhibkeedaba, KDE ayaa had iyo jeer ku leh meel mudnaan ka mid ah dadka isticmaala ee GNU / Linux.
Iyadoo bixitaanka KDE 4 arrimuhu waxay noqdeen kuwo fool xun, oo mar dhow la waayo - KDE 3.5, Aniga, sida inbadan, waxaan u cararay dhanka Gnome. Aniguna waxaan qirayaa inaan marwalba dareemay wax madhan.
Maxay ku sameysaa KDE marka dhameystiran wuxuu dhaafsiisan yahay waxa lagu arki karo isha qaawan. Tusaale ahaan, wax aan had iyo jeer dhaleeceeyo waa xaddiga xulashooyinka ay ku jiraan, labada desktop iyo barnaamijyadooda. Laakiin ha i maqlin, tani way ka fog tahay diidmo maadaama ay ka mid tahay qodobbada lagu taageeray miiska Jarmalka.
Dhibaatada ayaa laga yaabaa inay tahay in qaar ka mid ah, dhammaan xulashooyinku aysan ku oollin meeshii saxda ahayd taasna waxay u horseeddaa adeegsadayaal badan inay dareemaan culeysyo badan oo fursado ah, oo aan ku celiyo, kaliya waxay keeneysaa faa'iidooyin.
KDE waxaad leedahay dareen ah in codsi kastaa leeyahay waxa aad u baahan tahay iyo xitaa in yar oo dheeraad ah. KDE wax badan ayey ka horumarisay xagga waxqabadka iyo waxtarka, iyada oo aan laga tegin qorshayaashii aan ku baran jirnay, waxay ku guuleysatay inay soo bandhigto habab cusub oo loo adeegsado desktop-ka Tusaale tani waa plasma iyo Hawlaha, qalab loo adeegsan karo si aad u wanaagsan sida ay xaaladdu noqon karto, iyo in badan oo naga mid ah aynaan wali fahmin.
KDE waa miis loogu talagalay dhammaan adeegsadayaasha diyaar u ah inay khatar geliyaan xoogaa adeegsi, laakiin kuwaa beddelkood heli doona faa'iidada wax soo saar iyo karti badan hawl maalmeedkooda kumbuyuutarka. Aniga ahaan, Deegaan Desktop-ka wuu ka gudbaa inuu yeesho guddi (ama laba), menu, saxaarad system ... iwm Deegaanka 'Desktop Environment' waa dhamaan aaladaha iyo barnaamijyada noo ogolaanaya inaan si raaxo leh ugula shaqeyno faylalka iyo faylkeena, tanna tan KDE baabacooyinka ayuu qaataa.
Maxaan inta badan isticmaalnaa markaan la shaqeyneyno kumbuyuutar? Waxaan u maleynayaa in 98% akhristayaasha balooggan ay ila aqbali doonaan inay tahay Maareeyaha Faylka iyo Faylka. KDE Waxay u leedahay arji aan u baahnayn soo bandhigid iyo tayada iyo xulashooyinka jira: hoomboro. Haddii aadan awoodin inaad wax soo saar la yeelatid hoomboro, markaa ma jiri doonto faylal kale iyo Maareeyaha Faylka kale, ee fudud.
hoomboro waxay bixisaa tabs, koronto dheeri ah, terminaal isku dhafan, mashiinka raadinta, shaandhada raadinta, iyo faa'iidooyinka kale ee kaa dhigaya inaad si buuxda u xakameyso dukumiintiyadaada, feylashaada ama faylalkaaga.
Laakiin KDE xitaa way sii socotaa. KDE wuxuu na siinayaa is-dhexgal dhammaystiran oo dhammaystiran oo u dhexeeya mid kasta oo ka mid ah qaybaha uu ka kooban yahay. In kasta oo aanan si gaar ah u isticmaalin, isku darka Akonadi / Nepomuk / Virtuoso waxay ku siinayaan awood aan la qiyaasi karin marka si fiican loo isticmaalo. Haddii aad u baahato inaad wax qabato, waa dhif in aadan helin KDE barnaamijka saxda ah ee loogu talagalay.
Talada iga socota: KDE Waxaa loogu talagalay kuwa isticmaala kuwa doonaya inay wax walba gacanta ku hayaan, noqdaan kuwo waxtar leh, wax soo saar leh isla markaana keydiya waqtiga ugu badan ee suurtogalka ah. Jawi ku habboon dadka isticmaala ee gacanta ku haya tiro badan oo macluumaad ah, horumariyayaal, nashqadeeyayaal ama kuwa si fudud u doonaya inay ikhtiyaar u yeeshaan wax kasta, oo ay ku hagaajiyaan kumbuyuutarkooda sida ugu fudud ee suurtogalka ah.
Gnome: Boqorka oo aan lahayn carshi.
Gnome Shaki la'aan waxay ahayd muddo dheer boqorka deegannada Desktop-ka aragtidayda. Iyadoo bixitaanka KDE4, kororka Ubuntu, iyo fududaanta had iyo jeer lagu garto, si tartiib tartiib ah waxay u noqotay mid ay jecelyihiin isticmaalayaal badan oo ku baahsan meeraha iyadoo la sii daayay Gnome2, halkaasoo wax walboo fudud ahaayeen, iyo helitaanka codsiyada iyo sidoo kale xulashooyinka Desktop-ka waxaa lagu gaaray dhowr guji.
Gnome2 Waa deegaan loo yaqaan 'Desktop Environment' oo wax badan oo intaa ka badan lagu qaban karay oo ka fiicnaan lahaa. Si kastaba ha noqotee, horumariyeyaasha mashruuca ayaa u galay Gnome3, Deegaanka Desktop-ka oo leh maktabado hagaagsan, laakiin matalayay isbadal kadis ah (xitaa ka weyn tan ay sababtay KDE4) loogu talagalay dadka isticmaala Gnome2, yaa u tagay kala diristii isagoo raadinaya waxyaabo kale oo bedela sida Xfce, Lxde ama leedahay KDE.
Ma dhihi karo taas Gnome isaga oo leh Shell noqo codsi xun oo ka fog. Gnome3 Weli waa mid aad u awood badan oo leh qalab aad u fiican, xitaa dad badan oo isticmaala ayaa ku qanacsan wararka, laakiin falsafada shaqada ee lagu yaqaan miiskan ayaa si isbadel ah u muuqatay muuqaalkeedana, waxaan aaminsanahay, inaysan diirada saareynin isticmaalaha ugu dambeeya.
Ujeeddo kasta oo ay leeyihiin kuwa soo-saareyaasheeda, waxaan ku aragnay balooggan isbeddelada uu kumbuyuutarkani ku socdo, taas oo aan u maleynayo, in aysan ku guuleysan haba yaraatee. Gnome Waxay isku dayeysaa inay gasho suuq aysan dhul ku laheyn, oo ay jiraan duruufo kale oo horumarsan oo horeyba u jiray. Mustaqbalka Gnome waa gudaha GnomeOS, Mashruuc aanan ku dhiiran karin inaan faallo ka bixiyo, maadaama wax aad u yar laga ogyahay.
Laakiin wax walbaa ma xuma, sidaan ku idhi, Gnome Waxay leedahay codsiyo aad u wanaagsan, aadna u fudud in la qaabeeyo, mararka qaarkood waxaa ka dhiman xulashooyin marka loo eego kuwa ay leedahay - KDE, laakiin sida awood leh oo shaqeynaya.
Gnome sidoo kale waxay u adeegtaa aasaas u ah kuwa kale Gobollada aad u xiiso badan sida ay yihiin Midnimada y Qoraxda. Faylkaaga iyo Maareeyaha Faylkaaga (Nautilus), inkasta oo uusan lahayn dhammaan sifooyinka hoomboroSidoo kale waa mid wax soo saar leh oo aad u fudud marka la barbar dhigo tii hore ee la soo sheegay. Lagu horumariyo Gtk, Waxay leedahay xirmooyin badan oo u gaar ah iyo dhinac saddexaad, laakiin nasiib darro Boqorka ayaa lumiyey caannimadiisa.
Talada iga socota: Gnome Waxaa loogu talagalay kuwa adeegsadayaasha ah ee soo jiitay caqabadaha cusub iyo isdhexgalka cusub ee loogu talagalay gaar ahaan tiknoolajiyada taabashada, kuwaas oo aan ka walwal qabin isticmaalka kumbuyuutarka iyo luminta xoogaa ilo ah. Haboon haddii aad isticmaasho qolofka kale sida Qoraxda o Midnimada.
Xfce: Beddelka Gnome 2
Xfce ayaa u yimid buuxinta booska ka tagay kuwa badan Gnome2. Desktop oo horey u jiray dhowr sano hadana si tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib tartiib ah u haysta Wax ku dhowaad khilaaf ah haddii aan tixgelinno taas Xfce waxay caan noqotay sanadihii ugu dambeeyay.
Xfce ayaa a Gnome oo leh waxqabad yar. Muuqaalku asal ahaan waa isku mid oo wuxuu buuxinayaa shuruudaha ahaanshaha mid fudud, dhakhso leh, fudud in la isku hagaajiyo oo marka la shakhsiyeeyo, aad u qurux badan. Laakiin maadaama wax walba aysan fiicnaan karin, waxaa ka maqan waxyaabo badan, codsiyadeedu waa kuwo aad u fudud mana lahan qalab wanaagsan oo lagu maareeyo nidaamka.
Dabcan, in lagu dul dhiso Gtk, si fiican ayaad u isticmaali kartaa codsiyada Gnome, laakiin uguyaraan waxaan jeclaan lahaa inay lahaato qalabkeeda.
Mid ka mid ah qodobada daciifka ah ee Xfce waa si sax ah Faylkeeda iyo Maareeyaha Faylka: Thunar. Cudurdaarka awgood inuu lumin doono iftiinka, horumariyayaashu way diidan yihiin inay ku darsadaan tabsyo dheeri ah ama looxyo, sidaa darteed la shaqeynta codsigan waxay qaadataa wax soo saar badan
Inta soo hartay, wax walba waa mid aad u fudud waana la qaabeyn karaa Xfce si buuxda u (ama inta badan) ka socota Xaruntaada Dejinta. Qaybta 4.10 waxay ku dartay waxyaabo badan oo horumar ah oo loogu talagalay dadka isticmaala waxayna noqon laheyd mid xiiso leh in la arko mustaqbalka deegaankan Desktop hadda Debian ayaa u qaatay sidii desktop-ka caadiga ah.
Talada iga socota: Xfce Waxaa loogu talagalay kuwa adeegsadayaasha ah ee aan u baahnayn inay ku qabtaan hawlo horumarsan nidaamka, kuwaas oo jecel Desktop fudud, oo doonaya inay marin u helaan dhammaan barnaamijyadooda oo ay ku jiraan qasabno yar. Waxay ku habboonaan kartaa Qorayaasha, Saxafiyiinta iyo dadka kombiyuutarka ugu adeegsada waxyaabaha aasaasiga ah, iyagoo siinaya isu dheellitirka awoodda iyo xawaaraha.
LXDE: Kuwa ugu yar, ugu dhaqsiyaha badan laakiin ugu awoodda yar fasalka
Lxde waa tan ugu yar deegaanka Desktop-ka laga sameeyay Gtk, waa kan ugu dhaqsaha badan sidaas darteed, kan ugu badan ee ka maqan codsiyadiisa, sidaas oo kale Xfce, waa inaad ka faa'iideysataa qalab badan Gnome si loo dhamaystiro fursadaha kala duwan.
Muuqaalkiisu sida caadiga ah wuxuu ina xusuusinayaa Windows XP oo shaqo yar ayaad ku heli kartaa u habeyn qurux badan, hase yeeshe, dhibic u roon deegaankan Desktop-ka ayaa ah Faylka iyo Maareeyaha Faylka PCManFM.
PCManFM Waxay leedahay astaamo qaar ka mid ah walaalihiis ka weyn sida baarkooda, oo ay weheliso xawaareheeda iyo quruxdeeda, ayaa ka dhigaysa tan ugu fiican Thunar, oo ay aad uga sii dheer tahay xagga wax soo saar, habeyn iyo qaabeyn.
Talada iga socota: Lxde Waxay ku habboon tahay kooxaha waxqabadka hooseeya iyada oo ay ugu wacan tahay dheelitirka ay naga siineyso xawaaraha iyo fudeydka. Waxaa lagula taliyay dadka isticmaala khibrad yar, maxaa yeelay wax walba gacanta kuma soo dhowa.
Bilowgii waan idhi hadana markale ayaan ku celinayaa: Miis kasta waa dhameystiran yahay ama kuma xirna baahida mid kasta. Mid ka mid ah 3dan nooc (obviating) Qolofta Gnome)Diyaar u ah oo diyaar u ah inay socdaan, way sahlanaan karaan in loo isticmaalo isticmaaleyaasha cusub.
Qoraalkani waa wax aan ka badnayn dib-u-eegis dusha sare ah oo aan u eexanayn mid kasta oo ka mid ah Degaankan Desktop-ka ah. Isticmaale kastaa wuu ogyahay illaa heerka ay u habeyn karaan, u qaabeyn karaan oo uga faa'iideysan karaan ikhtiyaarrada mid kasta oo ka mid ah, taas oo, dabcan, anan ku xusi karin.
Dhammaantood way kufiican yihiin waxay qabanayaan, mid walbana wuxuu ka jawaabayaa baahiyaha noocyada kala duwan ee adeegsadayaasha. Haddii aad i weydiiso, waan la joogayaa KDE y Xfce, waxay kuxirantahay waxaad ubaahantahay inaad sameyso. Kee doorbideysaa
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Muuqaal / Shakhsiyeyn » KDE, Gnome, Xfce, LXDE iyo ra'yigayga iyaga ku saabsan.
148 faallooyin, ka tag taada
Runtu waxay tahay waan jeclahay Xfce, LXDE iyo KDE, way fiican yihiin haddii mid ama ka kale ku tiirsan yahay qalabka kombiyuutarka maxaa yeelay dhammaan 3da waxaan sameyn karaa waxyaabo isku mid ah laakiin isku si uma noqon karo. Xp
asxaabta wanaagsan ee xD aniga aniga waan jeclahay kde inkasta oo lafteeda ay culustahay laakiin dan kama lihi: 3 waa qurux marka aad maareeyso inaad u habeyso sida aad rabto xD halkan waxaan kaaga tagayaa sidii aan uga tagay kdegeygii qaaliga ahaa:
iyo yapa 😛 Waxaan uga tagayaa casharradan aan ku sameeyay boggeyga si aan u jaangooyo oo aan uga tago toban 😛
Jawaab ku bixi Makubex Uchiha (azavenom)
Waxay i siisaa qaladkan:
Waxaan horeyba u ogaa shalayto si cadaalad daro ah inuu martigaliyahu ujoojiyay balooggayga xaqiiqda fudud ee ah inaan gaadhay kudhawaad ​​3000 booqashooyin kudhowaad 4 bilood oo aan kusugnaa, waxaanan idhi kudhowaad 3000 maxaa yeelay aad ayaan uga yaraa inaan u tago meesha halkaasna way igu dhacdaa sida in aysan jirin wax aniga oo aan horay ii digin taasina waa sababta aan u lumiyay wax walba oo igu kici karayey inaan sameeyo 🙁
Waan ogaa in isla marka @elav isku dayo KDE inuu la sii joogi doono hahaha. KDE wax badan ayey ku horumarisay noocyadan ugu dambeeya qaybtanna waxay diiradda saari doonaan sixitaanka cilladaha iyo dib u dhaca, go'aanka aadka u wanaagsan ee soosaarayaasha ee ah "soo dejinta beddel "
GNOME2 wuxuu ii ahaa midka ugu raaxada badan, la beddeli karo, ugu dhaqsaha badan kombuyuutarrada waaweyn. Waa wax laga xumaado in falsafadiisii ​​ay is bedeshay. Taasi waa sababta aan ugu dheggan yahay Debian Squeeze ilaa taageerada ay dhammaato, ka dib waxaan ka fekerayaa u dhaqaaqista sanduuqa furan, yaa garanaya xfce.
Haatan waxaan haystaa KDE iyo Xfce oo ku jira shabakadda shaqada. Waa inaan qirto in dhawaanahan aan isticmaalay KDE more more ka badan
KDE waa wax kale. Waxaan sidoo kale isticmaalaa KDE iyo Xfce laakiin waa inaan qirto in KDE ay tahay in la yimaado lana isticmaalo, wax walbana waa diyaar si uusan isticmaaluhu ugu baahnayn inuu sameeyo ama wax u ogaado, oo ku habboon shaqada oo uusan waqti ku luminin inuu wax hagaajiyo.
Waqtigan xaadirka ah ee aan kaaga soo qorayo Xfce runtiina waxay tahay inaad u baahan tahay inaad waqti fiican geliso si aad "diyaar" ugu noqoto maxaa yeelay marka la eego waa wax laga naxo, runti waxaan ku qaataa waqti dheeri ah qaabeynta iyo habeynta shaqada xDD
Haa, dabcan, laakiin si aad u aragto, Tuning Xfce aniga ahaan waa wax aad uga fudud kan KDE. Intaa waxaa dheer, Gtk wuxuu leeyahay mowduucyo badan iyo xulashooyin, kaliya waa inaad isbarbar dhigtaa gnome-look with kde-look ..
> mowduucyo kale oo badan
Taasi waa mawduuca la socda KDE (iyo Obsidian) aad ayey u qurux badan yihiin 🙂
Hal su'aal waad salaaman tahay. Aynu iska iloobin hagaajinta, waxba ha ka baqin, midabada, waxyaabaha la isku qurxiyo, iwm. Waxaan diirada saari doonaa oo kaliya nidaamka iyo codsiyada u shaqeeya sida ay ku timaado, iyada oo aan la arkin "boodboodka" maxaa yeelay tusaale ahaan, midabka ama saameynta daaqadu ma sameynayso barnaamijka aan abuurayo ama wax aan ku baaro tirada shucaaca ku jira cimilada aniga ayaa iskiis ii xaliya (taasi waa sababta aan u idhaahdo "pijadas" aan muhiim ahayn). Waxaad isticmaaleysay linux mudo dhowr sano ah (Ubuntu, Opensuse, Fedora, Linux Scientific on Gnome, KDE iyo Xfce) oo waxaad badeshay qeybinta waxyaabaha aaladaha iyo beryahan dambe maadaama aanan rakibi karin dhowrkii biloodba mar, waxaan ubaahanahay sanado maxaa yeelay tijaabooyinka ayaa ah waxa iigu dambeeya , waana shaqo, cilmi baaris. Majiraan ciyaaro marcinanito ah, waxyaabo yaab leh malaha, laga yaabee fiidiyoow iyo xoogaa muusig mp3 ah oo kaliya kumbuyuutarkayga shaqsiga ah. Laakiin dabcan, ma jecli inaan kumbuyuutar kasta ku haysto qaybinta iyo bey'adaha kala duwan, haddii ay jiraan 5 kombuyuutar oo dhammaantood isku mid ah waxyaabaha shaqsiyadeed. Waqtigu waa mid aad u qiimo badan mana la joogi karo caadooyin ama dhaqamo kala duwan oo ka yimaada kombiyuutar ilaa mid kale, aniga oo adeegsanaya barnaamij ka socda hal deegaan ka dibna mid kale oo jawi kale ku jira oo leh fursado kala duwan, tab, iwm. Waad fahantay waxa aan ula jeedo, in kastoo hubaal qofna uu dhihi doono in isla barnaamijyadaas loo isticmaali karo kombuyuutarrada kala duwan. Laakiin sidaas maahan.
Marka waxaan doortey Saynis laakiin KDE-da ay sidato waa mid da 'yar, inkasta oo ay ugu yartahay, way shaqaysaa waana waxa aan daneeyo, laakiin deegaankani waa mid heer sare ah mana siiyaan muhiimadda lagama maarmaanka u ah inay si sax ah u yeeshaan rakibay oo dhameystirtay. Uguyaraan kuma guuleysan inaan u haysto sida Fedora KDE tan iyo markii ay miiqday. In Sayniska, sida Centos waxaan u maleynayaa, waa inaad gacantaada ka joojiso codsiyo badan oo gnome ah, haddii aad taqaanid iyaga si loo aqoonsado mid kale, inaad ka tagto KDE saafi ah. Laakiin waxa aan idhaahdo, ma aanan gaadhin mana garanayo inay khaladkayga tahay ama in qaybintu aanay wax intaa ka badan bixinayn.
Marka maanta Slackware oo leh Kde iyo Xfce ayaa maskaxdayda ku jirta. Keebaad dooran lahayd? Waxaan ka fikirayaa in aan haysto mashiin duug ah oo wax weyn u noqon doona Kde, in kasta oo SL ay si fiican u dhacday oo xubinta ugu dambaysa ay ka fiican tahay Xubuntu aniga iima socoto, waxba Ubuntu, taasi waa sababta aanan been u sheegin. Marka hal ikhtiyaar wuxuu noqon karaa Kde dhamaantiis laakiin midka hore ee leh XFCE, laakiin…. Marka laga hadlayo dunta talobixintaada ee KDE ee bii'ada wax soo saarka leh, miyaad igula talin laheyd aniga sidoo kale maadaama aan naftayda kaliya u huro baaritaanka jaamacadda?
Waa inaan dhahaa SL oo leh Gnome ayaa ugufiican, waxaan jeclaan lahaa inay sifiican ulashaqeyso KDE, laakiin waxaan horey usheegay inaanan guuleysan. Haddii qofna haysto talo bixin si loo rakibo KDE SL ama Centos oo leh nadaafad la mid ah wareejinta Fedora KDE waan ku qanacsanahay. Mawduuca koodhadhka warbaahineed ee badan iyo walxaha ku jira SL KDE waxoogaa dilaa ah
Wax kale oo ku saabsan KDE iyo talladaada. Waxaan aad u isticmaalaa USB drives-yada waana muhiim. Iyo Gnome iyaga ayaa si nadiif ah looga soo saaray, laakiin maaha KDE oo leh dolphin, waad kala saari kartaa iyaga, haa, laakiin had iyo jeer waa la quudiyo aakhirkana waa inaad ku jiidataa iyaga oo ilkaha ruugaya ... Hubaal! Xal ma ku haysaa KDE? Tani waa muhiim maxaa yeelay waxaan u isticmaalayay SL Gnome kaliya tan.
Waan ogahay in aakhirka aysan su'aal ahayn. Ugu dambeyntiina, adoo tixgelinaya shaqadayda, miyaad ku talinaysaa SL ama Slackware?
Salaan kadib, iyo inaad ogtahay mahadsanid dadka adiga oo kale ah, inbadan oo naga mid ah ayaa ka baxnay Windows.
Waxaa cad inay farsamo ahaan aad u yaryihiin injineero ama saynisyahano halkan jooga. Waad ku mahadsantahay si kastooy ahaato maxaa yeelay waxyaabaha aad qorto qaar badan baa caawiya. Waxaan akhriyaa ku dhowaad maalin kasta.
Yup, waxaan bilaabayaa inaan aaminsanahay haa haa
Haa !!! \_ (ツ) / laakiin qof walba oo wada jira si fiican ayuu u shaqeeyaa.
Waxaan doorbidayaa LXDE iyo tan "ka itaal yar" waa qaab xoogaa adag oo jawiga ku leh fekerkeyga suubban mid ka mid ah kuwa gacanta ku haya faylalka ugu fudud ee aan soo arkay, sida PCManFM, laakiin haye. Bilowgii waxaan isticmaali jiray Gnome waanan isticmaali jiray markay kor u kacday Gnome 2 laakiin waxaan ka mid ahaa kuwii ugu horreeyay ee ku dhaca Gnome 3 runtiina Shell-kooda ama wax kasta oo Gnome 3 ii sheegay inay ahayd waqtigii aan raadsan lahaa aragti cusub illaa Waxaan aadaa LXde waana ku faraxsanahay inaan arko in waxyaabaha qaarkood ay xitaa ka dheereyd XFCE laakiin waan aqoonsanahay in XFCE ay ku garaacdo Robustness maxaa yeelay inkasta oo ay yartahay horumariyeyaal (Waan hubaa in bulshada XFCE ay ka weyn tahay LXDE) laakiin hey… waalan oo kasta oo uu mawduuca.
Uma muuqato aniga mid iga awood yar, maxaa yeelay iyada oo aad ku sameyn karto waxyaabo la mid ah kuwa ka jira deegaannada kale, iyo isticmaalka hoose, tusaale ahaan taasi waa sababta aan u jeclahay Lubuntu, waxay leedahay muuqaal muuqaal ah oo aad u wanaagsan isla markaana aad u yar.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaan dhihi lahaa waa caqli yar dadka isticmaala marka ugu horeysa marka loo eego jawiyada kale, gaar ahaan dhanka qaabeynta LXDE, oo ah halka ay waxyar ka yara ...
Haa, dabcan waad ku sameyn kartaa waxyaabo caadi ah jawiyada kale, laakiin waa howlo fudud oo aad u aasaasi ah.
Aan aragno, waan kuu fududeynayaa. Markii aan tixraaco awood, waxaan ku sameeyaa iyada oo ku saleysan xarumaha wax soo saarka ee qalabku ku siiyo.Tusaale, ka jawaab su'aalahan fudud:
- PCManFM ma leedahay bar lagu shaandheeyo waxyaabaha ku jira?
- PCManFM ma leedahay mashiin raadin oo lagu rakibo?
- PCManFM ma leedahay terminal la dhisay?
- PCManFM ma leedahay barxado?
- PCManFM ma leedahay ikhtiyaar ay ku muujiso kooxo fayl ah?
- PCManFM ma leedahay ikhtiyaar ay is barbar dhigto faylasha?
Runtii maahan inaad iijawaabto maxaa yeelay waan ogahay jawaabta. Aniga lafteyda waa inaan qirto in kastoo aan jeclahay Xfce, aysan waligeed yeelan doonin kalabar xulashooyinka ay leedahay KDE, taas oo qalabkeedu ka dhigayo midka ugu wax soo saar badan uguna awooda badan ee jira.
Kuwa aqoonta u leh, kaliya isbarbar dhig krunner-ka Gnome ee "orodka". 😀
Laakiin waa in wax soo saarku uu yahay sida aad u aragto fikraddaada wax soo saar, taas oo macnaheedu uusan ahayn inaad khaldantahay, laakiin aniga wax soo saar leh ayaa ah codsi ii oggolaanaya inaan sameeyo fal gaar ah si dhakhso leh oo fudud, adiga PCManFM waxay leedahay bar shaandheeye nuxurka ama raadinta ama terminalku waa shaqooyin, aniga aniga waa ii siyaado ah, shaqooyin ay qabtaan barnaamijyo kale oo si gaar ah loogu talagalay iyaga, sida terminalka, ama sanduuqa raadinta (taas oo run ah inay tahay wax LXDE asal ahaan ka maqan daqiiqad) ama shaandhayn, marka laga reebo, waa waxyaabo aad ku dari karto laba guji, ama sidaan ku idhi, barnaamijyada kale ee loo sameeyay ayaa samayn kara.
Tusaale ahaan, maxaad wax uga beddeleysaa sawir ka yimid Word, adigoo awoodi kara inaad wax ka beddesho Photoshop, oo loo abuuray?
Ka sokow, LXDE waxaa loo sameeyay raadinta muraayad fudud oo fudud, taas oo u dhiganta shaqooyin yar ama ka yar dhammaystir ama hawlo kooban, marka haddii qof doonayo inuu wax soo saar yeesho, iyagu ma doortaan LXDE maxaa yeelay taas looma abuurin.
Ka sokow, haddii aad rabto inaad wax soo saar ku yeelato shaqo shirkadeed, waxaad u badan tahay inaad u isticmaasho Windows barnaamijyadeeda xafiisyada iyo qolalka, iyo sidoo kale barnaamijyo kale oo loo abuuray tan ama hawshaas ama hawshaas, illaa aad isticmaasho Windows shaqada GNU / Linux.
LXDE ma ahan mid ka awood yar, waa, sida ugu fiican, waxsoosaar yar marka loo eego deegaannada kale ee desktop, laakiin waxaan u maleynayaa in awoodda aysan ku xirnayn oo keliya heerka wax soo saarka, laakiin sidoo kale waxyaabo badan, sida adeegsiga, marin u helka, muuqaalka muuqaalka ...
Laakiin waa in wax soo saarku uu yahay sida aad u aragto fikraddaada wax soo saar, taas oo macnaheedu uusan ahayn inaad khaldantahay, laakiin aniga wax soo saar leh ayaa ah codsi ii oggolaanaya inaan sameeyo fal gaar ah si dhakhso leh oo fudud, adiga PCManFM waxay leedahay bar shaandheeye nuxurka ama raadinta ama terminalku waa shaqooyin
Dhab ahaan, shaqooyinka ka dhigaya la shaqeynta faylasha, arjiyada, fayl aad ufudud. Aynu nidhaahno waxaad furaysaa PCManFM, waxaad aadeysaa galka ay ku yaalliin kun dukumiinti PDF ah, waxaad bilaabeysaa inaad qorto magaceeda oo waxaad qorto waa inuu u dhigmaa magaca asalka ah. Shaandhada loo yaqaan 'Dolphin filter', sida aad wax u qoreyso, dukumiintiyada intiisa kale way baaba'aan, iyaga oo ka tagaya uun isku soo aadaanta ... Maxaad u malaynaysaa inay ka dhakhso badan tahay waxna soo saar badan?
Kuma raacsani haba yaraatee wax ku saabsan Windows = Wax soosaarka.Hadaba, marka hore, Windows Explorer waa wax laga yaqyaqsoodo, qasan, dhammaan astaamaha waxaa lagu soo bandhigaa qaab jahawareer leh, ma ahan mid caqli gal ah, mana lahan tab iyo dheeri dheeri ah. Way ka fududdahay isticmaalka PCManFM ama Thunar Windows Explorer, si aan tusaale kuu siiyo.
Aynu aragno, haddii aad qaadato qaybtaas sadarka ah, macnaheedu ma garanayo, ama wuxuu ku soo beegmayaa sidaad u malaynayso, laakiin qaybta kale ayaa ah udub-dhexaadka dooddayda, iyagu waa hawlo, haa, laakiin hawlo dheeri ah, wax maahan in ay tahay inaan lahaado PCManFM waa inay haa ama haa leedahay, haddii shaqooyinkaas aad sheegayso ay kaa caawinayaan inaad wax soo saar badan yeelato, aadna u wanaagsan tahay, laakiin waa la ogyahay inay saameynayaan waxqabadka, LXDE-na waa inuu noqdaa mid fudud oo fudud, oo aan wax soo saar lahayn, ama maahan Sidoo kale deegaanno kale, marar badan waxaa jira barnaamijyo fudud, iftiin iyo wax-soo-saar leh iyo waqtiyo kale oo aan jirin, maxaa yeelay way adag tahay in la helo isu-dheelitirnaan dhammaystiran oo u dhexeysa wax iftiin ah (oo badanaa leh shaqooyin ka yar, xulashooyin ama astaamo) iyo wax wax soo saar leh.
Sidoo kale ma dhihin Windows-ku waa isku mid ama waa kan ugu wax soo saar fiican, laakiin inta badan waa kuwa ugu badan ee shirkadaha loo adeegsado inay shaqeeyaan, taas oo macnaheedu uusan ahayn inay tahay tan ugu isticmaalka badan, waa tan ugu wax soo saar badan.Haddii aad sax tahay, Windows Explorer Way nuugtaa, laakiin waa tan ugu isticmaalka badan, taas macnaheedu maaha inay tahay tan ugu wax soo saar badan.
Hagaag, waxaan isticmaalaa LXDE oo maamule feyl ahaan waxaan u isticmaalaa Nautilus sidaa darteed waxii PCmanFm wuu dhamaaday, shaqsiyanna waxaan doortaa GNOME, iyo in aysan aheyn isticmaalaha ugu dambeeya, waa been kuwaa, waa deegaanka loogu talagalay isticmaalahaas ma rabto in aad pimp aado wax kasta oo kale, waa wax ku habboon qofka ku cusub Linux
Runtii aad ayaan uga helay maqaalkan, anigoo fiirinaya shabakadaada hadii aan arko cilad, waxaad arkaysaa wax aad uyar oo qoraagu yahay, taas oo ah, sanduuqa yar yar ee aakhirka waa inaad xafidaa, laakiin aad dhigtaa meel kale oo qortay. Aniga tusaale ahaan sidoo kale waxaan dhigi lahaa dhinaca miiska akhriska.
Ku saabsan qodobka laftiisa, KDE hadda waa ikhtiyaarka ugu fiican uguna dhameystiran, in kastoo aan jeclaan lahaa inay hagaajiso qaar ka mid ah codsiyada KDE, anigu ma jecla wax, tusaale ahaan, Dragon Player, ama VLC, runtuna waxay tahay, Waxaan kahelaa waxyaabo kale oo badalan oo wanaagsan sida ciyaartooyda fiidiyowga ee Qt, Bangarang iima soo jiito fiiro badan aniga sidoo kale .. hadaad dadka kale taqaano waan ku qanacsanahay
Waad ku mahadsantahay soo jeedinta. Xaqiiqdii, waxaan mar horeba ka fikirnay inaan qoraaga meel sare ka saarno .. 😀
Ku saabsan KDE, waxaan jeclahay VLC-kayga siduu yahay, hadana waxaan helay Bangarang waana jeclahay 😀
Aan aragno, maahan inaanan jeclayn, ee maahan inay yihiin ciyaartooydii fiidiyowga ee GNU / Linux ee aan aad u jeclahay, waxaan u maleynayaa inaan kuu sheegay, Gnome, waan jeclahay Totem, waa waxa uu ciyaartoy noqon lahaa aniga ahaan, xulashooyinka saxda ah iyo kuwa lagama maarmaanka ah, isdhexgalka fudud ... Waxaan raadinayaa wax la mid ah KDE, labaduba aad ayey u culus yihiin, mana jecli Dragon Player.
Bangarang ma ahan ciyaariyahan xun oo fiidiyoow ah, laakiin waa ciyaaryahan aad uxun oo abaabula maktabadaha muusikada, waana sababta aanan u rabin, waxaan dhaafayaa barnaamijyada nuqullada ah, haddii Amarok horeyba u qabtay shaqada muusigga sifiican, maxaan u Ciyaaryahan kale ma leedihiin Maxaa igu soo celiya, laakiin maxaa qalad ii qabanqaabiya?
Amarok ama Clementine ee muusikada, iyo halka VLC loogu talagalay fiidiyowga, anigoo sii wada raadinta raadinta ciyaartoy fiidiyoow hufan oo fudud oo loogu talagalay KDE.
cabdiraxman (@ cabdiraxmanmax22) dijo
Iskuday SMPlayer Aad baan ujeclaa oo waxaan isticmaalay VLC noloshayda oo dhan.
Reply to somalia (@ nacaybtire22)
Waad ku mahadsan tahay sidoo kale kuwa dhigay, in kasta oo muusigeyga aanan aad u jeclayn isdhexgalka, waa sida VLC, oo fool xun oo xoogaa culeysyo badan leh.
Isku day SMPlayer 😉
Waayahay, sidoo kale aniga sidoo kale waan isku dayaa 🙂
Waad isku dayi kartaa kaffeine, umplayer, kmplayer, playbak, bakaar, loopy, dhammaantood waa ciyaartooy kde video quruxsan.
Waad ku mahadsantahay liiska, waxaan balanqaadayaa inaan isha ku hayo iyaga 🙂
Waa hagaag, runta ayaa ah tan iyo markii aan helay SMPlayer ma doonayo inaan dib ugu laabto VLC.
Waxaan iftiimin lahaa wadarta is dhex galka ay la leedahay KDE, maareeyaha cinwaankeedu (Xitaa way soo dejineysaa iyaga) iyo sidoo kale in taranka fiidiyowga uu ka sii soconayo meeshii aan ka tagay (Ma ahan VLC)
Jawaab Miguel Ángel Martínez
Waan jeclahay qof walba marka laga reebo lxde.
Waxaan isku dayay qorfe, waxaan isticmaalaa midnimo, waxaan isticmaalaa qolofta gnome, waan jeclahay laakiin ma aqaano sida loo qaabeeyo si ay uga sii qurux badnaato.
Dhanka kale, KDE waa mid ka mid ah kuwa aan arko oo aan xasuusto daaqadaha taasna wax xoogaa diidmo ah ayey i siinaysaa, laakiin ma dafirayo in kombuyuutarro badan oo kde ah oo aan arkay ay qurux badan yihiin, laakiin ma ogi sida ay ugu guuleysteen, laakiin arrintu waa sida ay ku timid asal ahaan (chakra, iyo kuwa kale ee livecd distros ee leh kde) ma aanan jeclayn gabi ahaanba 🙁
Waa run. Tan waxaa kuu sheegaya qof aan jeclayn muuqaalka iyo dareenka KDE ahaan, laakiin sida Xfce, KDE waa loo habeyn karaa sidaad u jeceshahay oo xitaa waxaad u siisaa muuqaalka deegaan kale oo desktop ah.
KDE iyo Xfce ayaa ah kuwa ugu badan ee la qaabeyn karo ..
Iyo LXDE sidoo kale. Ma lahan qalab badan oo garaaf ah oo ay ku sameyso, laakiin waa la habeyn karaa, wey awoodaa, iyo wax badan.
Laakiin wax yar ayaad shaqeysaa, waxaan u maleynayaa .. Waxaa jira waxyaabo ay tahay inaad gacanta ku dhigto feylasha .gtkrc-2.0 ama gtkrc.mine, tusaale ahaan.
Haa, waa run in qaabeynta feylasha qoraalka ay qaadaneyso waqti ka badan hadii lagu sameeyo aaladaha garaafka. Hadda, maadaama aanan ka mid ahayn kuwa jecel inay yeeshaan kumbuyuutar kala duwan toddobaad kasta, waxaan sameeyaa habka qaabeynta qaab ficil ahaan kaliya hal jeer, waqtiga rakibidda. Kadib, markay tahay sidaan jeclahay, waxaan ilaaway inaan shakhsiyeeyo desktop-ka (ugu badal badalka gidaarada)
Intaa waxaa sii dheer, markaan arko sida dhakhsaha badan ee ay u shaqeyso LXDE marka la barbardhigo deegaanno kale, kama xumahay inaan ku dhex maro xoogaa isku-dhafnaan ah, maxaa yeelay deg-degga bey'adda ayaa bixisa caqabado kale oo kasta oo ay lahaan karto ... aniga ahaan, Dabcan.
taringa waxaa ku yaal boosteejo lagu hagaajinayo kde aad u wanaagsan.
Xidhiidhkuna waa? Mahadsanid 😀
Waa run in KDE ay aad u dhameystiran tahay laakiin maadaama ay aad u dhameystiran tahay sidoo kale waa mid aad u culus inkasta oo ay ku guuleysteen inay siiyaan xoogaa fudeyd ah illaa nooca 4.0. Waxaan rajeynayaa in hada iibsashada Digia laga soo qaatay Qt wadada KDE lagu hayn doono wadada saxda ah maxaa yeelay waa wax aad u foolxun in hada kadib socod badan ay tahay inay kasoo bilaabaan xoq hadiiba ay milkiilayaashu qaadaan wado xun. haddii aan dooran lahaa deegaan kale marka laga reebo LXDe waxaan sii joogi lahaa XFCE laakiin sidaan idhi… waa ra'yigayga.
Hadaad ogtahay. Hadda waxaan ku isticmaalayaa KDE shaqadayda 'Netbook'. Adiguna miyaad ogtahay waxaas? KDE waxay i cuntaa wax isku mid ah (mararka qaarkood way kayar tahay, marar kale oo ka badan) marka loo eego Xfce, iyo wax badan, oo aad uga yar Gnome ... Maxaad u malaynaysaa?
Saaxiib, waan ixtiraamaynaa aragtidaada, dabcan waxaan u qabannaa dhadhan ahaan: Midabbada 😀
Waxaan isticmaalaa KDE iyo XFCE, dhibaatada i haysata KDE waxay tahay in isticmaalka CPU-ga uu kaco oo sawirkeyga uu barafoobo, dhanka isticmaalka xusuusta wax dhib ah malahan. Miyaad wax fikrad ah ka haysaa sababta uu u isticmaali karo processor-kan sare?
Isku day inaad isticmaasho kormeeraha nidaamka oo aad ka dalbatid kor ilaa hoose ee cpu si aad u aragto waxa sida ugu badan u cuna, waxaad sidoo kale isku dayi kartaa inaad curyaamiso nepomuk ama akonadi Si aad u isticmaashid cpu yar waxaad aadi kartaa muuqaalka codsiyada, qaabka, hagaajinta ganaaxa iyo saamaynta garaafka xulo cpu yar. Mararka qaarkood waxay ka fariisataa isticmaalka qaar ka mid ah xisbiga 3aad tmb plasmoid.
Sida caadiga ah nidaamyada waxaa amar ku bixiya isticmaalka CPU.
Taasi waxaan u maleynayaa inay ku xiran tahay wax badan oo ku saabsan Qalabka aad isticmaasho.
Waxaan hayaa AMD Athlon 64 × 2 Dual core 3800 + 2Ghz processor 4Gb oo RAM ah.
😮 si dhab ah?, Waa maxay netbook aad ku mashquulsan tahay iyo / ama qeexitaanno ?? iyo maxaa distro tb ???
si aan u arko haddii ay ka shaqeyneyso miinadayda: p
Ku jawaab maxi
Tani waa buugiisa internetka: https://blog.desdelinux.net/unity-en-netbook-hp-mini/
Waxayna isticmaashaa Tijaabinta Debian (Wheezy current).
HP Mini 110 leh 1Gb oo RAM ah .. 😀
Runtii waan jeclahay LXDE, kheyraadka yar ee ay isticmaasho waa wax layaableh aniga ahaanna waxay leedahay dhowr xarumood, F4 si aad ugala soo baxdo boosteejada fayl kasta, calaamado, kaliya adoo garaacaya waxaan ka raadin karaa faylka ku jira galka aan ku jiro, iwm.
Weli waan garwaaqsanahay inaysan ku habboonayn adeegsadaha noloshu iyo in qof walba uusan jeclaan karin fududaanta LXDE.
Kuwa jecel desktops-yada yar, waxaan ku tusayaa shaashadda KDE-ga ee ka socota mageia 1 markii aan ku haystay pc-ga:
Markaa ha oran inaadan haysan KDE fiican.
Ku jawaab tarantonio
Aniga oo ka faa'iideysanaya faallooyinkii hore, soo-jeedintayda hoos-u-dhigga ah ee qaabeynta websaydhka, oo aan jeclahay:
- gaabin url markaad daabacayso, taasi kuma dhacayso sidii faalladaydii hore oo jidhka ka baxda
- qoraaga boostada uma muuqdo mid wanaagsan, si ka fiican korka ama ka sii muuji
Waxaan kuugu hambalyeynayaa naqshadda cusub, ma jiraan wax badan oo lagu hagaajinayo, waa wax dhammaystiran.
Gaabinta URL-yada ayaa aad u wanaagsan, waa inaad fiirisaa haddii alaintm (yaa barnaamijka mawduuca) wuxuu haystaa waqti hadda la sameeyo, maxaa yeelay tani waa hirgelin aan ku jirin qorshayaasha oo wuxuu hayaa waxyaabo kale oo uu sameeyo hahahaha.
Waxaan u isticmaalaa KDE on Mageia 2, aad ayaan ugu faraxsanahay, inkasta oo ay run tahay in mararka qaar fursado badan oo xoogaa kala firdhay ay isku qaldaan, laakiin waan ku dhaganaanayaa uun sababtoo ah xulashooyinka qaabeynta.
Waxaan sidoo kale jeclaan lahaa inaan ka akhristo ikhtiyaarrada kale, hadda waxaan ka fekerayaa inaan ku daro Wax-barashada, taas oo inkasta oo qaab gaar ah uusan ahayn mid horumarsan, beryahan dambe si aad ah ayey u shaqeynayaan, sidoo kale waa mid aad loo qaabeyn karo (marka laga reebo liiska) Iyo inaad soo jeediso deegaanno kale, waxaan maqlayay Openbox iyo waxyaabo la mid ah, laakiin kuwaan kama aanan arkin waxyaabo badan naftooda.
mahadsanid macluumaadka maanta
Ku jawaab khourt
Waxaan u dhawahay inaan u mahadceliyo Ubuntu oo gelisay Midnimada oo iga dhigtay inaan raadsado mid kale, maxaa yeelay tan iyo markii aan rakibay Xubuntu waan ku faraxsanahay, laptop-kayga ayaa u muuqda mid ka duwan, waa raaxo. Khasaaraha kaliya ee dhadhankeygu waa in muuqaalka kore ee guddiga ugu weyn ee aan ka helay Gnome Classic in badan oo ka mid ah Ubuntu. Inta soo hartay, haa, Thunar wax yar ayaa laga yaabaa in uu iga dhinto laakiin aniga wax badan ayaan haystaa.
Ku jawaab Rubén
Waxaan aaminsanahay in midkoodna uusan kan kale ka itaal rooneyn, sida uu qoruhu tilmaamay, waa arrin dhadhamin iyo ujeeddooyin, yoolal. Had iyo jeer waxaa jiri doona doodaha nuucaan ah, oo aan ku koobnaan doonin oo keliya deegannada desktop-ka, nidaamyada hawlgalka, buugaagta, xanjada la ruugo, teebabka, IPhone-yada, PC-yada, iwm.
Aniga ahaan mida ugu dhameystiran uguna soo jiidashada badan waa KDE laakiin ma isticmaalo madaama fursado badan ay dawakh iga dhigayaan.
Waan jeclahay miiska fudud iyo waxa aan gacanta ugu baahnahay, ee aan ku isticmaalo Xfce oo aan jeclahay.
Waxaan sidoo kale isticmaalaa Gnome 2 oo ka socda SolusOs hadana waxaan tijaabinayaa xlde oo aan haba yaraatee wax xun ahayn, sidoo kale waxay la kulantaa waxaan u baahanahay.
Midnimada, Qorfaha iyo Gnome aragtidayda waa kuwo aan macquul ahayn oo ku yimid aragti, ka hor intaanan u adeegsan KDE midabbo iyo waxtar badan, oo aan kiisku ahayn.
Ku jawaab platonov
Waxaan siin doonaa KDE isku day kale, Waxaan aqriyay faallo badan oo wanaagsan dhawaanahan.
Dhinaceyga, hada waxaan la joogaa Mate iyo Compiz waana ku faraxsanahay nolosha, sida haddii aan wali la joogo Gnome2 ...
Ku soo jawaab FerGE
Maqaal weyn, aad isu dheellitiran, +1!
Dabcan, markaa waa inaan ka mid ahaado 2% ee isticmaaleyaasha hadhay aniga ahaan aniga dalabka ugu muhiimsan maanta oo aan shaki ku jirin kan aan isticmaalo inta ugu badan - kuwa aan aad u isticmaalo, waa inaan dhahaa- waa biraawsarka: leeyihiin hal ama in ka badan oo daalacayaal ah oo furan, waa xarunta aan ku isticmaalo mashiinka.
Hagaag haa, biraawsarku waa mid ka mid ah barnaamijyada ugu isticmaalka badan, laakiin dhamaadka wax walba waa inaad ku dhimataa Maareeyaha Faylka 😀
- KDE (isticmaale cimri dheer, iyo horumariye).
- Midnimo (waxay leedahay fikrad weyn, laakiin waxqabad xun).
- XFCE ama LXDE (waa isku heer, aad bay u dhowrsan yihiin).
- qorfe (isku mid jir, wax cusub ma aha).
- Gnome (aan la isticmaali karin).
@hipersayan_x Miyaad ku horumartay KDE? Ma xiiseyneysaa inaad iskaashi kala sameyso qaybinta?
Oo maxaad ka aaminsan tahay MATE DESKTOP ??? Waan jeclahay Gnome 2 fargeeto rajo wacan nolol dheer. http://mate-desktop.org/
Waqtigaan la joogo, KDE waa desktop-ka aniga iigu fiican, horumarkiisa wuxuu ahaa mid cajiib ah xasiloonida iyo xawaaraha, waana mid dhameystiran oo laqeexan karo. Waxaan sidoo kale ka mid ahaa Gnome baxsad ee ay hadda version, marka hore sababtoo ah ay interface aan macquul ahayn ee pc caadiga ah, fursadaha ay qaabeynta yar (ku dhowaad nil), marka lagu daro in inta badan mawduucyada aan jeclaan, sidoo kale ku daray dhibaatada kordhinta ee aan la jaanqaadi karin gudbinta noocyada, marka laga reebo cunitaanka ilo ka badan KDE. Waxaan adeegsaday XFCE iyo MATE, laakiin waxbadan igama dhaadhicin. Sidoo kale looma baahna in la diido inay jiraan codsiyo aad u fiican oo Gnome ah, kiiskeyga waxaan door bidaa inaan isticmaalo Gnome multimedia codsiyada marka loo eego kuwa KDE. Isla qof waliba wuu istcimaalaa wixii isaga ula muuqda oo ku habboon baahidiisa, anigana tayda waxaa si wanaagsan u buuxiya KDE oo ah jawi desktop ah.
Muddooyinkan dambe waxaan isticmaalayaa laba beddelaad oo aan halkan lagu xusin, mandiil-qt iyo dugsi hoose (pantheon shell). Makiinada makiinada wax lagu xiro (oo aan aheyn jawiga desktop) Waxaan u isticmaalaa nooc kde ah oo aan lahayn kwin (Waxaan isticmaalaa sanduuqa furan) iyo bilaa plasma. Waxay u shaqaysaa si aad u wanaagsan (way ka xasilloon tahay plasma maadaama ay ka fudud tahay) wax yarna way cuntaa (waxay isticmaashaa wax ka yar 250 MB oo dhowr geeddi socod oo kde ah la bilaabay.
Pantheon waa qolof gnome ah haddii aanan khaldamin, waxay u isticmaashaa gala maareeyaha daaqadda, faylasha faylasha biraawsarka, looxa sida dekedda iyo dhowr barnaamijyo kale oo ay abuureen kooxda dugsiga hoose. Aniga ahaan waa wax fudud, jawiga ugu raaxada iyo xasiloonida caadiga ah ee aan helay illaa taariikhda marka lagu daro xasilloonida (xitaa haddii ay ku jirto alfa ama beta), in haddii, aysan lahayn xulashooyin habeyn badan.
Razor qt sidoo kale waan tijaabiyey waana inaan dhahaa waxay u noqon kartaa tartan weyn LXDE. Waxay ka maqan tahay qalabka qaar (tusaale ahaan, netbook-ka ma jiraan wax lagu sawiro heerka batteriga, ama ugu yaraan ma aanan helin), laakiin guud ahaan aniga waxay ila tahay inay mustaqbal leedahay, inkasta oo beryahan dambe aanan arag wararka mashruucan.
Dhanka pantheon, sida caadiga ah uma isticmaalo Gnome Shells firfircoon sababo la yaab leh awgood, si kastaba ha noqotee mashruuca aasaasiga ah wuxuu had iyo jeer ka walaacsanaa bixinta heer tayo oo gaar ah codsiyadiisa, markaa waxaan u maleynayaa in nooca xasilloonida uu bixin doono waxyaabo badan oo looga hadlo ku saabsan.
Marka la eego maqaalka, waxaan isku dayay kombuyuutarro la soo sheegay waana wax la yaab leh aniga in Gnome 3 uu ka careysiiyay Shell iyo falsafado badan oo adeegsi isla saldhig ah. Waxaan xasuustaa markii ay ku dhawaaqayeen in nooca 2.30 uu noqonayo nooca 3 (in kasta oo ugu dambayntii uu ahaa 2.32), waxay xuseen in isbeddelka uu noqonayo mid ka sii waxyeello yar, laga yaabee tixraaca wixii ku dhacay KDE waqtigaas.
Fikradayda fekerka isbadalku ma aheyn mid kadis ah, laakiin xoogaa xanaaq badan, gaar ahaan maqnaanshaha shaqooyinka qaar, in kasta oo aan ku celceliyo, si firfircoon ugama aanan isticmaalin sidaa darteed ra'yigeygu waa mid aad looga doodi karo.
Ugu dambeyntii, ka jawaabista su'aasha boostada, KDE waa miiskeyga aan doorbido, sababo badan iyo inkasta oo ay jiraan waxyaabo aanan jeclayn (sida dabeecadda ogeysiisyada xaaladaha qaarkood), had iyo jeer waxaa jira habab kale ama horumariyaha oo lala xiriiro leh.
Waan ka xumahay Vicky, laakiin miyaad faallo ka bixin kartaa waxyaabaha aad u adeegsanayso iyo macluumaadka ku saabsan sida loo rakibo Pantheon Shell?
Maaha wax aan waxba ahayn, muddo dheer ayaan isticmaalayay iftiin (ama E17) wayna ii shaqaysaa aniga si weyn. Waa wax laqaban karo, WAY KU SHAQAYSAA SIDA AAN RABO. Xushmad weyn ayaan u hayaa XFCE, laakiin E17 waa sida ugu dhakhsaha badan taas. KDE waxay leedahay codsiyo cajaa'ib leh, sida K3B-ta awoodda badan, si fudud ayaan u rakibay waxayna si yaab leh ugu shaqeeyaan awooddooda weyn laakiin iyaga oo aan lumin xawaaraha aan ubaahanahay Pcmanfm ayaa isiisa waxa aan ubaahanahay maareeye feyl waxaanan kaqaadaa Gnome ilaa Gimp iyo barnaamijyo kale oo ku qoran GTK2o3. Runtu waxay tahay inaanan haysan wax aan ka hinaaso kuwa waaweyn, waxay isiiyaan barnaamijyada aan u baahanahay, sameynta, oo ay weheliso E17, jawiga ugu wanaagsan ee aan abid soo maray, soon iyo si aad ah ayaa loo qaabeyn karaa. Aad u xun waa la dayacay. Sii isku day, waa run inay aad u kala duwan tahay markii hore, laakiin waxaa habboon in daqiiqado la qaato si loo qaabeeyo.
Waad ku mahadsantahay hadaad aqrisay dhamaan faaladan. 🙂
Kama hadli karo wax badan oo ku saabsan E17 sababta oo ah waxaan isku dayay aad iyo aad u yar. Xaqiiqdii ma aqaano inay tahay Desktop Environment ama Windows Manager ……
Waxaan sidoo kale isticmaalay e17 waana mid aad u dhakhso badan, in kastoo ay tahay inaan daacad u ahaano wali shaqo la'aan ayaa jirta, laakiin waxay si fiican ula tartami kartaa LXDE iyo XFCE dhibaato la'aan. Waxa igu fashilmay waa markii aan hagaajinayo menu-ka (waxaan jeclaan lahaa inay ilaaliso amarka aan doonayo) iyo xalinta shaashadda mararka qaarna ma xajiso oo waxay ku noqotaa 800 × 600 ...
Miyaad wax yar ka faalloon kartaa khibradaada aad la leedahay E ??? Isla marka aan ku bilaabo Mageia, waxaan u haajiraa imaatinka anigoo isticmaalaya Debian iyo derivies waxaanan rakibayaa E17.
Maqaal aad ujeedo badan .KDE sida ugu fiican, XFCE ixtiraam.
Qoraal wanaagsan. Aad ayaan u jeclahay KDE sababahaa aad sheegtay awgood (gaar ahaan quruxda), laakiin sida ay u dhaawaceyso waxqabadka waxaan had iyo jeer ku dhamaaday inaan ka tago (markii iigu dambeysay ee aan u isticmaalo waxay ahayd debian, taas oo aan u maleynayo inay tahay tan ugu badan xasilloon, laakiin xitaa debian KDE wuxuu ku dhammaaday inuu culus yahay). Waxaan dhawaan siiyey Linux Mint fursad markale, oo leh Cinnamon, laakiin markale, inkasta oo aysan ahayn wax weyn, luminta waxqabadka sababo la xiriira isticmaalka kheyraadka ayaa ku dhammaanaya jirro. Laakiin ka hor intaan tuurin Mint, markan waxaan go aansaday inaan isku dayo XFCE (dhowr sano ka hor waxaan ku isticmaalay Xubuntu, munaasabadaas waxaan kula dhibtooday cayayaan Thunar ah oo sudhay kumbuyuutarkeyga), runtiina waan ku faraxsanahay waxqabadka of my computer., aad u fudud oo waxqabad weyn. Caadi ahaan (iyo sababtoo ah waxaa jira barnaamijyo aniga igu qancin karin Linux ama sababta oo ah ma jiraan xulashooyin u dhigma) Had iyo jeer waxaan isticmaalaa Windows 7. Laakiin dhowr toddobaad ka hor waxaan si joogto ah u isticmaalaa Mint XFCE, aad iyo aad u yar ayaan ku noqdaa Windows (qaar ka mid ah baahi gaar ah). PCManFM waa mid aad u fiican, taas oo ah tan aan isticmaalo. Laga yaabee adiga taasi inay tahay wax aan micno lahayn: Aad baan u (xunnahay) inaan ku dhageysto muusigga qalab la yiraahdo "Enhancer 0.17" oo codka u hagaajiya si qurux badan, haddii uu jiri lahaa laacib ku shaqeeya Linux oo taageeraya ama leh wax u dhigma u dhigma , awood u yeesho markaa ku boodbooyinkeyga Linux wuxuu noqon lahaa kama dambeys. Dhanka kale, waxaan dhagaystaa muusikada Aimp iyada oo loo marayo Wine ... Muddo ka hor ma aanan dareemin raaxo, farxad iyo qanacsanaanta isticmaalka Linux. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ogaado in debian uu go'aansaday XFCE, isku darkaas ayaa ka dhigi doona kombiyuutarada xoog badan ... hubaal waxaan ku laaban doonaa debian. Farxad
Ma dhihi kartid Gnome oo leh shellkiisa waa codsi xun oo ka fog.
Haa waad dhihi kartaa way xun tahay, maxaa yeelay way xun tahay, wayna kasii daraysaa oo kasii daraysaa.
Waxaa laga yaabaa inay kuguula muuqato wax xun maxaa yeelay waxay ka tagtay fikradda guddi + desktop oo leh astaamo + liiska iibka laakiin aniga ahaan waxay ii ahayd hormar, mar aan isku dayay inaan la shaqeeyo, waad fahantay sababta wax.
Tilmaamo ka yar iyo ka yar + oo aan la hagaajin karin + ka culus + adeegsi yar iyo marin u helid = Xun
LOL !! Mana jecli inaan dhaleeceeyo Gnome wax badan, laakiin waa run, ma fahmin sababta ay uga sii yaraanayso una sii hagaajin karto? ka dibna waa inaan isticmaalnaa codsiyo aan rasmi ahayn iyo kordhin, taas oo ay tahay in horeyba loogu daro asal ahaan ...
Waan ka xumahay Gnome 3, haddii aad ka mid tahay 4-ta ugu shar badan !! Iyo in aanan ka aqoon XFCE ...
U fiirsasho wanaagsan Waxaan u isticmaalaa GNOME-Shell Fedora 17 Ma haysto ilo badan 1 GB oo RAM iyo processor Pentium 4 laakiin in kasta oo ay aad u shaqeyso: D. Bedelida mawduuca, ma ogtahay inay jiri doonto maalin horumarineed EFL oo ka socota Barcelona Spain? http://www.enlightenment.org/p.php?p=news/show&news_id=49 Waa Nofeembar 5, waxay umuuqataa in indha-indheeyaha uu durbaba batteriga ku hubinayo khariidadda tilmaanta inay tilmaamayaan inay horeyba uga shaqeynayeen Nuurka 18 http://trac.enlightenment.org/e/roadmap Waxaan rajeynayaa inaad tixgelin siiso u daabiciddeeda war ahaan.
Jawaab Aaron Mendo
XFCE RULLZZZ, waxa aan dhahayo waa in aan soo maray dhamaantood, waa wax lala yaabo laakiin waxay cuntaa ilo dhaqaale aniga ahaanna aniga marwalba ma haysto buugga xusuusta ee ku xiran korontada, nolosha batteriga waa mid aad muhiim u ah, hadda xfce + debian wuxuu soconayaa 5:30, KDE + Arch wuxuu socday 2:40, laakiin shaki la'aan KDE waa qurux badan tahay waana la isku haleyn karaa, hadda XFCE waa mid madadaalo badan maadama ay tahay inaad hesho waqti fiican oo firaaqo ah oo aad kaga tagto sida aad rabto, sifiican marwalba maqaal aad uwanaagsan iyo balooggu wuu fiicnaa laakiin waxaa jira wax aanan jeclayn waxaan u arkaa in gudiga saxda ahi aad u balaaran yahay ama uguyaraan shaashadaha yar yar waxay umuuqataa hehehe, salaan salaan iyo mahadsanid shaqo !!
Ku jawaab Ariki
Haddii aad ogtahay in uguyaraan KDE oo leh Debian, waxaan dareemay in isticmaalka batteriga uu ka sareeyo kan Xfce ee Debian 😕 Ma garanayo, laga yaabee inay yihiin fikradahayga 😀
Waa in isticmaalka uu sii weynaadaa marka la cunayo ilo badan, ugu yaraan qaftigayga kde waxaa la igu toogtay 400 mb ee isticmaalka aasaasiga ah, waxaan ula jeedaa wax soconaya, isla markaana batteriga wuxuu socday qiyaastii 2:40 saacadood, hadda ma lihi ' t isku dayay KDE on debian, waan arki doonaa haddii aan shaqada u soo dego dhamaadka usbuuca waxaanan dib kaaga sheegi doonaa sida aan ula dhaqmayo kooxdayda, salaan Ariki
Hagaag, sidoo kale waan jeclahay KDE sifiican ugama shaqeyso Debian, laakiin hada waxaan u adeegsadaa KDE Mageia wax wanagsana waan qabanayaa !!
Waa salaaman tahay, maqaal wanaagsan. KDE waa shaashad dhammaystiran oo dhammaystiran oo isku dhafan, inkasta oo aanan u arkin iftiinka oo dhan oo ay ka gaabis tahay furitaanka codsiyada marka loo eego deegaannada kale iyo sababta oo ah fursado badan iyo meel kasta way iga wareersan yihiin. XFCE waa shaashad fiican laakiin cudur daar uma lahan in sidaas loo dhameystiro maadaama muddo dheer ay joojisay inay noqoto miisaanka miisaanka fudud, waxay ku guuldareysatay Thunar, oo leh furayaasha kumbuyuutarrada iyo furayaasha shaqada iyo xulashooyin kale oo takhasus leh, gnome ma ahan mid culus, aniga Waxay igu bilaabeysaa wax kayar 300 MB inkasta oo ay guud ahaan isbadal ku timid fikirka deegaanka desktop (waxaan dhihi lahaa inay tahay meesha kaliya ee asalka u ah desktop) hadana wax soo saar badan ayaa laheyd iyadoo la adeegsanayo kiiboodhka. LXDE waa miisaanka miisaanka yar ee ay tahay inuu noqdo, waan ka saamaxayaa maareeyaha awood la'aanta iyo wixii la mid ah maxaa yeelay waxaa loo malaynayaa inay tahay kombiyuutarradii hore.
Maxay tahay inaad haysato kumbuyuutar fiican, run maahan @Elav, hadda waxaad dhigeysaa jawi kasta oo desktop-ka ah meeshuu ku habboon yahay, waxay ila noqotay wax la yaab leh inaad ku hadasho oo keliya waxyaalaha yaabka leh ee XFCE (wuu u qalmaa, mana ka sii maqnaato), in yar "habaar" loogu talagalay Gnome 3 (sidoo kale waa ku raacsan yahay) iyo KDE waa la ilaaway.
iyo dhamaanba inaad haysatid 4 gigabytes wan oo wanwanaagsan, waxaad mar kale isticmaaleysaa KDE, waxaan si rasmi ah kuugu soo dhaweynayaa naadiga KDE
Hahahaha, dhab ahaantii, waxaan ku haystaa KDE Netbook sidoo kale, oo ay weheliso Xfce dabcan ...
Warbixinta elav waa mid aad u wanaagsan, waqtigeygii yaraa ee Linux waxaan isku dayey afarta bey'adood, tan aan ugu jeclahayna waa xfce, waan jeclahay maxaa yeelay waan u habeyn karaa sidaan jeclahay mana cuno sida ugu badan ee kde , midka kaliya ee aanan jeclayn afarta waa gnome.
KDE kombiyuutarka macnaha
XFCE ilaa dhimasho, waa waxa kaliya ee aan u baahanahay, mar dambe, maya.
Ma isticmaalo dolphin, nautilus ama thunar. terminal wanaagsan iyo voila. Uma baahni kate ama gedit, vim iyo voila. wax kasta oo kale waxaan u baahanahay oo kaliya in aan qiyaaso, dhaqaajiyo daaqadaha, u dhaqaaqo daaqadaha una awoodo in aan sameeyo adiga oo isticmaalaya kaliya kiiboodhka (google chrome + vimium to navigation) runti ma waxaad dooneysaa inaad wax soo saar yeelato? waxaa jira deegaanno badan, oo ka wanaagsan kuwa lagu xusay inay sidaa sameeyaan. Kordhinta waxsoosaarka ayaa macsalaameynaysa jiirka oo aad wax walba ku qabankartaa, ama waxwalba oo aad kuheli karto kumbuyuutarka, muhiimadu waa in laqeexan karo oo aad dooran karto furayaasha aad ku shaqeyn karto 😉
Ku jawaab patz
Haa, waxaan u maleynayaa in dhahida in desktop-kan oo kale uu wax soo saar badan leeyahay ay tahay wax aan macquul aheyn maadaama wax soo saarku ku xiran yahay isticmaalaha, halkii Elav uu wax soo saar badan la leeyahay KDE, desktop-kaaga, aniga oo leh Gnome Shell, mid kale oo leh lxde iyo wixii la mid ah
Waxaan qabaa inay sax tahay.
Distoorka ugu fiican ee leh LXDE waa KNOPPIX .. kaliya maxaa yeelay waad xamili kartaa labada codsi ee KDE iyo Gnome oo ku shaqeynaya awood buuxda. Waxaan tan ku rakibay p4 2.26 iyo 700mb wan oo yar
Maanta waxaan isticmaalaa kaliya daaqadaha, laakiin waxaan rajeynayaa Mageia 3 oo leh KDE 4.9 iyo inaan dib ugu laabto Linux sida maalmihii hore.
Ku jawaab ULVER
Waa inuu sugaa waqti dheer 😉
Xageyna joogeen maareeyayaasha daaqada, sanduuqa furitaanka, sanduuqa qulqulaya, ama maareeyayaasha foorara sida dwm.
Ma ahan sababta oo ah waxay heystaan ​​ikhtiyaarro yar marka loo eego (guud ahaan way ka sii macquul badan yihiin tan weyn ee DE), waxay ka dhigan tahay inay ka itaal yar yihiin, ama wax soo saar leeyihiin sidaad ugu yeerto elav, kuwanna kaliya looma isticmaalo kumbuyuutarrada leh ilaha yar.
Ku jawaab Roberto Gea
Maqaalku wuxuu ku saabsan yahay Degaan Desktop, maahan Maareeyaha Windows. Waa run in OpenBox, Fluxbox ... iwm aad ku yeelan karto Miisas fiican, laakiin iyagu maahan Degaan Desktop sida oo kale .. 😀
Iftiimintu waxay soo gelaysaa kombuyuutarrada ??? Iyo mid kale oo shaki ah, maxay yihiin miisas kale oo jira oo la isku dayi karo? Waxay noqon laheyd mid xiiso leh in wax yar laga ogaado mawduucan, in fursad la siiyo kuwa aan sidaa loo xusin, sax?
Waxaan qabaa shaki la mid ah adiga. Sidan oo kale waxa la yiraahdo waxaa loogu yeeraa Desktop Environment, waxaan ogahay kaliya 4tan iyo RazorQT, ma ogi hadii ay jiraan wax banaanka ka ah.
Hadda, waxaan u maleynayaa in KDE ay la mid tahay ama ka fudud tahay Gnome.
Ka sokow in aad shaqsi ahaan ka sii qurux badnaato 😀 hahahaha.
Maqaal wanaagsan oo faahfaahsan, laakiin waxaan wax yar ka diidanayaa LXDE.
Aniga ahaan, LXDE waa mid aad ufudud in loowareejiyo si kaduwan jawiyada kale. Sida wax walba waa u fududahay sida akhrinta dukumiintiyada ama baaritaanka internetka.
Kuwa i garanaya way ogyihiin inaan isticmaalo LXDE, marka laga reebo inaan isticmaalo Fluxbox (oo aan la joogay 4 sano) halkii laga isticmaali lahaa Openbox iyo Thunar halkii laga isticmaali lahaa OpenBox iyo Compton si loogu daro xoogaa qalabka xafiisyada ah.
Maxaan u isticmaalaa? Kaliya waxay qabataa waxaan ubaahanahay inaan sameeyo, adigoon cunin xaddi badan oo RAM iyo CPU ah (Compton wuxuu kaliya cunaa 2Mb oo RAM ah).
Qaarkoodna waxay u arkaan in LXDE iyo Fluxbox midkoodna uusan foolxumeyn, waxaan kuu dhaafayaa 2 shaashad shaashadda kombuyuutarradeyda:
Wanaagsan, dhowr sano waxaan ahaa isticmaale Linux ah 100%. Marka hore sababo aqooneed awgood, Injineernimada kombiyuutarka iyo sababta oo ah aad ayaan u jeclahay. Hadda, waxaan jeclahay waxyaabo fudud dhibna iguma qabo isku day ilaa aan ka helo wax aan jeclahay.
Waxaan ku bilaabay Ubuntu + Gnome illaa ay u guureen Midnimo. Goor dambe ayaan laqabsaday deegaankan. Waxaan sidoo kale isku dayay qorfe iyo MATE. Guud ahaan, tijaabooyin badan kadib waxaan qirayaa inaan doorbido MATE ama qorfe, waxay kuxirantahay inaan rabo wax aad u fudud ama wax midab badan.
Midnimadu sidoo kale way fiicantahay, laakiin tan iyo markii aan ka daalay inaan dib u rakibo 6dii biloodba, waxaan la socdaa LMDE + MATE.
Sideed u aragtaa 3-daas deegaan? Gaar ahaan MATE oo ah fargeeto ah Gnome2 iyo Cinnamon oo ah fargeeto Gnome3. Kani ma waddadii Gnome ay ahayd inuu raaco? Mise ugu yaraan albaabka ayaa uga furan?
Haddii aad i weydiiso, waxaan u maleynayaa in MATE uu yahay mashruuc in kasta oo uu u wanaagsan yahay adeegsadayaal badan, inyar ka yar in la iloobo, maaddaama gabowgu uu cuno. Fikrad ahaan, Gnome 3 waa in lagu sifeeyaa qaab Classic ama FallBack.
Waxaa jira kuwo kale oo aan u maleynayo inay sidoo kale yeelan doonaan nasiibkaas.
Miiska ugu fiican, shaki la’aan kan aan isticmaalo. Waa iftiin, raaxo leh oo aad loo beddeli karo 😉 http://i.imgur.com/tN9Gx.jpg
Hahaha, sida wax looga beddeli karo shaki ayaan ka qabaa ..
LOL !! Cad !! Laakiin sidoo kale waxaan u maleynayaa inaad kaliya ku dari karto aalado oo dhibaatadu waxay noqon doontaa markii qof uu soo galo "desktop-kaaga" oo uu dhaqaajinayo meeshiisa!
Gnome Shell, maadaama ay tahay deegaanka kaliya ee desktop (marka laga reebo Midnimada) ee aan isticmaalay.
* Weligaaba Gnome Shell *
Ku jawaab Louis-san
Waxaan daawadaa KDEro badan baryahan, hehehe.
Aniga ahaan midka sida ugufiican ulaqabsadaa waa XFCE inkasta oo maalin walba aan jeclahay openBox badan
Waxaan u maleynayaa inay jiraan sababtoo ah mashruuca Gnome ma uusan jeclayn (marka laga tago haddii ay fiicantahay iyo haddii kaleba), iyo in badan oo ka mid ah waxa aan ka dooneyno desktop-ka waa aqoonsi, habeyn iyo muujinta ... waa wax KDE si fiican u bixisa kiiska deegaanno kale oo aan ku arko meel daciif ah, marka ay tahay inaad si toos ah wax uga beddesho feylka qaabeynta oo aad u adeegsato codsiyo dheeri ah iyo / ama ballaadhin, dadka isticmaala ee aan jeclayn inay "tinker", isticmaalayaal badan oo dhammaad ah in kombuyuutarkoodu kaliya u yahay hawlaha , shaqada, iyo madadaalada ayaa baqda oo dib ugu noqda Windows ama raadiya bedel kale. Aan cadeeyo, waxaan aad ula yaabay "tinking" kan kumbuyuutarkayga, laakiin dad badan ayaa arka shaqada iyo waxkasta oo aan qabanayo waana ka baqayaan. Dhadhankeyga, desktop-ka ugufiican wuxuu noqon doonaa midka u ogolaanaya dadka isticmaala dhamaadka inay u qaabeeyaan deegaanka habka ugu fudud uguna wanaagsan, marka lagu daro sameynta shaqadooda (iyo inaan lagu khaldin fursado badan, isha KDE)
Dhamaantiin waad salaaman tihiin, waxaan inbadan u adeegsanayey kombuyuutarkayga in mudo ah waxaanan la wadaagey waxa dadka qaar dhahaan, si kadis ah bay'ada MATE, qaar waxay u maleynayaan inay dhici karto inay duugowdo laakiin hadaad u fiirsato in loo isticmaalay sii deynta qayb ka mid ah sida "LMDE" Waxay noqon kartaa taasi taasi waa riixitaanka mashruucu u baahan yahay, waxaana la dhihi karaa kani waa mid ka mid ah kombuyuutarrada ugu fiican ee dadka isticmaala Gnu / Linux markii ugu horreysay, in kasta oo aan runtii jeclahay qorfaha oo lagu kordhiyo xoogaa waad ka dhigi kartaa inuu muuqdo xoogaa marka loo eego mintmenu ee loo isticmaalo MATE, qolofta Gnome waxay leedahay isbeddelo badan oo aan rajeynayo in mustaqbalka fog ay noqon karto wax fiican inkasta oo ay weli tahay mid ka mid ah kuwa aan ugu jeclahay sidoo kale, laakiin sida Elav sheegay waa arrin dhadhan iyo baahiyo
Ku jawaab DougGarcia
Kde wali waa desktop-ka ugufiican dhanka tayada wax qabad, laakiin dabcan hadii aan waligeen lajoogno Pentium IV waligeed waa caadi inaan gaabis noqono ... 🙂
Aniga oo ka hadlaya KDE, (oo aan u malaynayo in bulshada Linux guud ahaanba hoos u eegto wax badan) Waxaan la wadaagayaa habka Malcer ee farshaxanka loogu talagalay CHakara ee soo socota (soo baxa tan ama usbuuca soo socda):
Jawaab Inti Alonso
Sidaas ayaan u maleynayaa !! KDM iyo KSplash waxay ahaayeen wixii aan ugu jeclaa muuqaal ahaan, waxaan sugi doonaa nooca Megeia !!
Waxaan isticmaalaa LXDE waxbana ugama badalo, waa wax laqaban karo, malaha qofka cusubi wuu dhib badan yahay bilowga laakiin markaan sameeyo markii ugu horaysay wuxuu noqon doonaa xoogaa keeg ah iyo waxa aan ugu jeclahay desktops-yada fudud waxay u oggolaanaysaa barnaamijyadeennu inay u shaqeeyaan si fudud. XFCE waxay ila tahay inay tahay desktop aad ufiican laakiin iska jir, sidaa uma fududa hadaad haysato mishiin leh ilo yar uma maleynayo inay tahay ikhtiyaarka ugu fiican. Waxaan sidoo kale isticmaalay ICEWM waxaanan u arkaa inay tahay desktop aad u fudud oo fudud, aadna loo qaabeyn karo oo aad u fiican, in kasta oo ay tahay inaan wali waqti badan ku qaato.
Ku jawaab cogan
Waan ku raacsanahay in LXDE lagu kaabo waxyaabo ka socda Gnome, intaas ka sokow si aad u diyaar garowdo waxaad u baahan tahay aqoon hore si aad ula qabsato.
iyo Linux dijo
aniga ahaan KDE-ga ugufiican waa nooca 3.5 ..
Ma jecli qoraallada maanta .. xaqiiqdii mar hore ayaan ku rakibey 4.5 waan qabaa laakiin ma jecli. waa gaabis ...
Ku jawaab andlinux
Miyuu noocaas 4.5 ahaa mid aan fiicnayn in la yiraahdo, taasi waa, haba yaraatee lama nuujin ... 4.8 ama 4.9 waa wax kale.
Hagaag, waxaan kusii wadaa 4.3 !!! oo waxaan ku shaqeeyaa dhib la'aan ama lama filaan, wax walbana way shaqeeyaan oo wax yar bay i cunaan, sida Gnome 2.8
Anigu waxaan ahay isticmaale: slaxkware 12.2 KDE 3.5 .. FASTER AND STABLE ...
LAAKIIN MAANTA LAGU SOO DUUBO UBUNTU AYAAN JECLAHAY ...
Waxaan isticmaalay Gnome waqti dheer ... xitaa Gnome3 laakiin nooca cusub waligiis kuma qancin ...
Waxaan isku dayay KDE wax walbana way isbadaleen! Xaqiiqdii waa jawiga desktop-ka ugu fiican… wuxuu dareemayaa wax soo saar oo dhameystiran… waligaa kuma hareyso dareenkaas "wax ka maqan".
Waxaan isku dayay Chakra, Sabayon, OpenSuse iyo hadda Kubuntu. Dhammaan qalabka loo yaqaan 'distros' ayaa si wanaagsan loogu dhisay KDE.
KDE waa tan ugufiican, ma fahmin sababta aysan ugu haysan sida desktop-ka asalka u ah qeybinta badankood, hadii ay yihiin kuwo waxtar leh oo sidaa sameysmi kara.
Ku jawaab Neomito
Waxay ila tahay in tani ay tahay dhibaatada si sax ah: ikhtiyaarrada badan ee aad siiso dadka, murugada badan ayaa ka siinaysa iyaga (dhab ah!) Taasi waa sababta ay inta badan qaswadayaashu u doortaan deegaan fudud oo xaddidan oo u fudud iyaga inay bartaan oo ay isticmaalaan .
Waxa kale oo jira xaqiiqo jirta: maanta in badan oo ka mid ah dadka isticmaala desktop-ka ma qodaan nidaamkooda, waxay adeegsadaan waxa la siiyay iyo habka loo siiyo - tani waxay ka mid noqon doontaa waxyaabaha guusha u ah istiraatiijiyadda Apple ee alaabtooda?
KDE SC waxay sii ahaan doontaa jawiga xulashada adeegsadayaasha horumarsan ...
Way dhacdaa in dhammaanteen aynaan jeclaan in la habeeyo, KDE waxay leedahay siyaabo badan oo aad uga dhigto waxa aad jeceshahay. Taas ka sokow waxay u baahan tahay xoogaa ilo dheeri ah.
Uguyaraan waan ku qanacsanahay LXDE ama xitaa OpenBox, marwalba waan jeclahay xawaaraha mana qorshayn.
Ku jawaab Bryant
Xeerarka KDE !!
Maaddaama Gnome 2 la waayey, waxaan la qabanayaa Ubuntu 11.04 ... Oo waxaan raadinayaa "wax" aniga iyo qoyska intiisa kale ku habboon ... Oo waxaan u maleynayaa inaan ku dhegi doono Xfce. Thunar? Hagaag, waxaan u adeegsadaa Taliyaha Habeenkii ama TotalCommander khamri (waan ka xumahay, MIDNA maareeyayaasha faylasha ee aan isku dayay kumbuyuutarka ayaan u soo dhowaanayaa, aad uga yar garaacista). Fiidiyow? VLC, dabcan. Maqal? Maanta waxaan helay Qmmp, taas oo aan ka badneyn linux winAMP, waxay xitaa isticmaali kartaa maqaarka 2.x. Xfce ee Linux Mint waa mid aad u wanaagsan, maaddaama ay bedesho "codadka" codsiyada menu-ka ee loogu talagalay mintMenu oo dhammaystiran.
Taas waxaan ku haystaa nidaam ka hawl yar (PC dhowr sano ah, horeyba, wuxuu u leeyahay 120Gb HD), wuxuu cunaa wax aad u yar, aadna wuu u mashquul yar yahay. Dhibaatadayda KDE 4 ama Gnome3 ayaa asal ahaan ah inaanan waqti u haynin "barashada" meesha ay wax ka jiraan: ama deegaanku waa mid dareen leh, ama aniga ima shaqeynayo. Waayahay, waxaa jira waxyaabo ay tahay in lagu sameeyo saldhiga (Kama cabanaayo, waxaan ahay eey duug ah waxaanan ku bilaabay kumbuyuutaro ka hor inta uusan IBM iibin PC-kii ugu horeeyay ...), laakiin hadii ay tahay inaan 4 daqiiqo ku qasaariyo Xusuusnow meesha ay tahay inaan ka beddelo asalka desktop-ka, Ma arko meesha wax soo saarku ku yaal (waa tusaale….)
Sikastaba, dhowr bilood kadib, waxaan isku dayay (waana iska tuuray) LXDE (qoyska intiisa kale ma jeclaan doonaan), Gnome3 / Unity / Shell (hadii qodobka adag ee Linux uu yahay inaad ushaqeyn karto sidaad rabto, maxaad ula Gnome Ma awoodo? Banaanka ...), KDe (waa culus tahay, waana wareer, waxay igu qaadatay in ka badan nus saac in aan ka joojiyo sheygaas Plasma ama wax kasta oo loogu yeero, iyo netbook-ka waa inaan aado internetka si aad u ogaato sida ay ugu bedeshay «caadi iyo tan codsiyada ... sifiican, banaanka)
Marka la soo koobo: Waxaan haystaa Xfce iyo reexaanta leh qorfe (linuxMint + Cinnamon). Waan dul joogaa Xaqiiqdii, waxaan la socdaa liveUSB delinuxMint Xfce. 🙂
Ku jawaab ManuelVLC
Tilmaanta guud ee hoos timaada khamriga? Hahaha, sida cabsi leh. Maad maqal wax ku saabsan Dolphin, miyaad maqashay? iyo Krusader?
lxde maahan desktop aad uxun, waa kan ugu dhaqsaha badan ee aan ogahay waqti yarna waad ku qurxin kartaa ... cod uqaadida deegaanka kaliya ee sida fiican iila shaqeeya aniga kumbuyuutarkeygii hore !!! haha
Ma isku dayday AwesomeWM ama dwm?
Waad ku mahadsantahay qoritaanka maqaalkan iyo dhamaan intii fikrad ka dhiibatay. Runtii waad barataa.
Waxaan la joogay Linux muddo 2 sano ah waxaanan isticmaalay dhowr nooc oo noocyo iyo deegaanno kala duwan ah.
Waxaan la kulmay ubuntu Jaunty Jackalope gnome, aad baan uga helay oo waan guursaday ubuntu. laakiin markii uu la soo baxay jawiga midnimada waxaan u cararay sidii oo ay igu eryanayaan rasaas. Waxaan ku dhex wareegey meelo kala duwan oo kala geddisan aniga oo aan helin xiriir qoto dheer, laakiin jacaylku wuxuu ku soo noqdaa buugayga.
Linux Mint Maya Xfce 32 waxoogaa
Inta soo hartay waa wanaagsan yihiin laakiin waxaan ku dhegan yahay midkaan maxaa yeelay wuxuu u shaqeeyaa sida aan u jeclahay.
Waad ku mahadsantahay macluumaadka tan iyo markasta oo aan doonayo inaan soo dejiyo miiska midig ee xfse.gnome miiska b ..blablabla, mana aanan fahmin buro, runtu runti waa mid waxbarasho leh.
Waxaan doorbidayaa LXDE, waa iftiin, aad u dhakhso badan, waxay muujisaa wax kasta oo aad u baahan tahay waxaana si khaas ah loogu habeyn karaa adigoo ku ciyaaraya sanduuqa furan, heer sare shaki la'aan.
Ku jawaab gustavo martínez
Hagaag, illaa iyo inta aan ka walwalsanahay, waxaan ka shaqeynayay tan iyo 2000 oo aan la shaqeynayay Linux, waxaan ahaa uun isticmaale dhamaadka ah mana helayo wax badan oo ka mid ah isku dheelitirka, mawduuca su'aasha laga qabo ee ku saabsan baahida iyo dhadhanka waxaan la joogayaa KDE, waxaan haystaa netbook leh kde iyo duqsi, waxaan isku dayay gnome classic, 3, midnimo, xfce iyo si aad u wanaagsan laakiin ma aha wax aad loogu farxo in laga shaqeeyo netbook oo leh jawigaas, laga yaabee gnome 2 xoogaa la jaanqaada laakiin marka la tixgeliyo wixii ay kor ku dhaheen waa run mararka qaar waxay qaadataa mid inbadan oo kaqosolka badan shaqeynta sidaa darteed waxaan la joogaa kde, kumbuyuutarkeyga kumbuyuutarka waxaan ku hayaa lint mint 14 oo qorfe leh waxayna u socotaa 100 aad baan u jeclahay, si daacad ah markii aad la qabsato hal bey waxay qaadataa xoogaa inaad la qabsato mid kale, markaan isticmaalay gnome2 Waxay igu kacday wax yar oo kde ah, waxaan u maleynayaa in biya-shubka uu noqon karo hordhaca midnimada ubuntu maxaa yeelay halkaas ayey isticmaaleyaashu u haajireen deegaan kale, sidoo kale waxaan u maleynayaa in qaar badani ay ka cabsanayaan kde, waxay dhahaan waa fiicantahay laakiin wax yar kala duwan, laakiin si kastaba ha noqotee markay soo galaan waxaa looga tagayaa wanaag dhadhan ahaan ... Doorashadaydu waa KDE: D ...
Ku jawaab Xocoyotzin
Waxaan isticmaalaa LXDE waan isku dayay dhamaantood, tan iyo markii aan raadinayay xawaaraha waxaan si cad u xushay midkaas, haddii aan si cad u bilaabo anigoo fiirinaya miisaska qurxoon oo aan indhahayga cunayo waxaan doortaa KDE, laakiin xawaaraha labadaba lama barbardhigo.
KDE iyada oo aan wax saameyn ah la helin oo HW hufan waa _practically_ sida ugu dhakhsaha badan LXDE - milliseconds-ka farqiga ah ee ka dhex jiri kara hal desktop iyo kan kale ayaa la siiyaa dhammaan wixii ka sarreeya dhammaan codsiyada laga heli karo miis kasta halkaasoo iska cad xitaa ma isbarbardhigi kartid waxqabadka codsiyada loogu talagalay KDE kuwa loogu talagalay LXDE.
Waxaan u wareegay KDE maxaa yeelay gnome3 ayaan raaxo lahayn, badiyaa waxaan furaa faylal qoraal oo kala duwan (doc, txt) iyo xaashiyaha. Laakiin deegaankaasi wuu isku qasmay oo waxaan dhigay meeshii aan doonayay. Iyo Dolphin xitaa waxaan ku helayaa faylalka FTP, mar dambe uma baahni faylka 'file' iyo Kate waxaan furayaa oo aan ku keydsanayaa isbedelada shabakadaha adigoon isticmaalin macaamiisha FTP (marka laga reebo Dolphin)
Aniga ahaan MATE ugu fiican, oo leh Linux Mint, hal marin.
Waad salaaman tihiin, waxaan ku jiray Linux mudo 3 bilood ah waxaanan baadi goobayay noocyo kala duwan iyo qeybinta iyadoo la marayo Ubuntu 13.04, 13.10, xubuntu, lint mint, qorfe iyo xfce, crunshbag, fedora gnome iyo xfce, bodhi Linux, manjaro xfce, qorfe iyo sanduuqa furan, dugsiga hoose OS waa qurux badan yahay
oo waxaan dhihi karaa xfce marka la eego tan ugu qurux badan waa tan Manjaro mana aanan la joogin, maxaa yeelay waxaan si buuxda u guursaday sudo apt-get install, hahaha
mint xfce sidoo kale ma xuma, mana ahan wax aad u adag in la habeeyo
Jawaab Leonardo Daniel Velazquez Fuentes
Waxaan doorbidayaa LXDE, maadaama aad qaban kartid waxqabadyada aad ku qaban laheyd mid ka mid ah desktops-yada kale laakiin xawaare aan la qiyaasi karin! Aad iyo aad ayey u dhakhso badan tahay xitaa socodsiinta codsiyada culus sida eclipse, gimp ama daalacashada hadda leh tabs badan oo furan.
In kasta oo ay run tahay in KDE ay gacanta ku hayso wax kasta oo fududeynaya shaqada, isticmaalka badan ee kheyraadka ayaa ka dhigaya mid culus oo gaabis ah oo ku filan dhowr hawlgal, xitaa in ka sii badan haddii disk-ka adag sannadihiisii ​​uu horay u lumiyay kacdoonnadiisa In kasta oo ay run tahay in LXDE lagula taliyay dadka isticmaala khibrad yar in ka badan maxaa yeelay mararka qaarkood waxaa jira hawlo aan lahayn qaab muuqaal ah oo garaaf ahaan ah waana inaad u baxdaa boosteejada laga baqo, sidaana waa kiiska kumbuyuutarrada laga jaro (waxaa jira Obkey laakiin isuma dhafan tahay markii hore).
Waxaan u maleynayaa in xawaaraha weyn ee LXDE (oo aad uga dheereeya Windows XP) uu ka dhigayo cilladaha yar yar ee shaqeynaya ee ay leedahay iyo sidii dhibic xoogan, waxay ku bilaabmaysaa si ka dhakhso badan desktop kasta oo kale iyo dhammaan codsiyada gnome waxay si fiican u shaqeeyaan. Kaalay, waa uun arrin la jaanqaadkeeda oo leh wax yar oo laylis ah iyo isticmaalkeeda maalin walba waa xabbad keeg ah; in la iloobo gaabiska marka la furayo daaqadaha, shilalka xusuus la'aan darteed, ka shaqeynta tusmeynta xad dhaafka ah, iyo kuwa kale. Dheriga kasta ayaa ku filan 🙂
kde waa la habeyn karaa si loogu dhigo meel la mid ah kombuyuutarrada kale
Gnome2 wuxuu ahaa (aniga) jawiga ugu wanaagsan desktop-ka ee aan abid iskudayo. Astaamo badan oo fudud oo xarrago leh ayaa maamuleha reer Mexico ka dhigay hal shay oo dheeraad ah oo ku jira liistadayda Deegaannada la jecel yahay. Taasi waa sababta aan u leeyahay, ERA.
Markii Gnome3 soo baxay, aragtidayda ayaa naxdin gelisay; Sidee ayey suurtagal ku noqon kartaa in sannado badan oo la isticmaalayo labada baarar, kii loogu talagalay codsiyada firfircoon uu baaba'o waana inaan ka soo guuraa hal daaqad oo aan u wareegaa mid kale qaab sidan u qosol badan leh, taas oo ah in la riixo isku-darka furaha ama la furo menu-ka codsiyada barakaysan. ? Iyo in animations-ka, dhammaado xaaladda.
Sikastaba, waxaan u maleynayaa in Gnome3 uu ahaa fiasco guud isla markaana lahaa ujeedo cad oo ah inuu iswaafajiyo Midnimada. Waxaan u maleynayaa xitaa kan dambe inuu garaacay. Ma ogi.
Waxaa lay soo jiitay LXDE waqti dheer. KDE waxaa loogu talagalay kuwa jecel inay habeeyaan. Aniga maahan, ee habka. Dhadhamadu waa dhadhamin.
Dhamaan Linux waxaan la joogayaa Linuxmint KDE iyo kuwa aan u isticmaalay dhamaan fedora, suse, ubuntu, mandriva cinemon IWM marwalbana waa inaan kufaanaa linuxmint17 fudud si loo rakibo waxay u shaqeysaa dhamaan barnaamijyada kaladuwan ee warbaahinta, internetka, shaashadda xafiiska shaashadda, waraaqaha gidaarka iwm
Ku jawaab Carlos Bolaños
Roman Alejandro Lazcano Hdez. dijo
anigoo rajeynaya inaad fiicantahay markaad aqriso tan, waxaan kuu sheegayaa, waxaan soo iibsaday qalab hubaysan oo la iigu soo dhiibay daaqadaha 7, —- amd athlon IIx2250 (64 bit) processor oo ah 3000 mhz, hooyo targ asrok n68-vs3, ddr3- a1 2048mb / 400mhz, - oo ahaa burcad-badeed, dhibaatooyinka dhaqaalaha awgood iyo raadiyay bedello isku dayaya ubuntu, linuxmint, oo xilligan la joogo fedora -live, desktop-86-64-20-1. iso– taas oo waliba i siisay dhibaatooyin sida layaabka. Ubuntu waligey cod kama sameyn karin, laba cusbooneysiin fedora ah ayaa la soo dejiyey laakiin ma aysan shaqeynin, maxaa yeelay iima ogola inay wax uun sameyso ka dib markii aan galo desktop-ka maadaama calaamaddu aysan dhaqaaqin haba yaraatee, taasoo ku eg sameynta shaashadda ama muuqaalku yahay qaloocday oo yaabay. Maanta waxaan rabay inaan daaqadaha dib u rakibo mana aysan awoodin, waxaan isku dayay inaan dib u rakibo ubuntu laakiin midkoodna, ma akhriyo saxannada rakibida, qoraal aan aqriyay wuxuu leeyahay nooca fedora wuxuu sameeyaa waxa Windows 8 sameeyo, taas oo waa in la xiro waddo aan la awoodi karin in la rakibo nidaam kale oo hawlgal. fadlan caawi.
Jawaab Román Alejandro Lazcano Hdez.
Balooggan ayaa wax badan iga caawiyay sidii aan u dooran lahaa is-dhexgal ... waxay muujineysaa in qof kasta oo qoray uu leeyahay fikrad ku filan waxa uu ka hadlayo iyo wixii uusan uga hadlin ixtiraamkeyga \_ -_- /
Professor Yeow dijo
Shaki la'aan XFCE 4 meel kasta ayey u duulaysaa, iyo awoodda muuqaalka ay leedahay aad ayey uga sarreeysaa xitaa marka laga soo horjeedo Gnome. Laakiin KDE4 waa qurux, waxay ka soo horjeedaa inta sano ee ay ku yara xadidan tahay qalab duug ah laakiin haddii ay jiraan mashiin fara badan, horeyba KDE5 (oo ku wareegsan noocyada ugu horeeya) waa wax cajiib ah. Shaki la'aan, haddii aad leedahay wax ka badan 2Gb oo wananka KDE4 (ka dibna marka uu 5aad yimaado) waxay noqon doontaa tan ugu fiican ee aad dooran karto. Dhanka kale, XFCE wali waa ikhtiyaar weyn.
Jawaab Professor Yeow
Ilaa ay MATE bilaabeen inay barakiciyaan: XFCE LXDE
Jawaab Demian Kaos
Anigu waxaan ahay taageere KDE, waxaan isticmaalay gnome dhowr jeer - ma aanan jeclayn - way i dhibaysaa, waxaan si guul leh ugu rakibay LXDE mashiinka aan caadiga ahayn, waxaan tijaabinayaa XFCE waana ka jeclahay wax ka badan LXDE ...
Jawaab Alejandro Tor Mar
Sawirka meeleynta Antonio Gonzalez dijo
Anigu waxaan ahay saynisyahan kumbuyuutar, farsamo yaqaan iyo barnaamij-yaqaan, waxaan u isticmaalaa daaqadaha xafiiska barnaamijyada xisaabinta iyo guriga waxaan ku haystaa laptop-ka Windows iyo Linux, kiniin iyo taleefanka gacanta ee android.
Waxaan adeegsaday dhowr jeer oo waxaan ku xayiray Debian, sababtoo ah xooggeeda, tirada faylasha, iyo falsafada darteed.
Waxaan u adeegsaday gnome 2 fudeydkiisa iyo fudeydkiisa, laakiin maadaama aan inbadan ku shaqeysto feylasha waxaan dhibsaday xaqiiqda ah in nautilus (sida thunar) uu tirtiro (qashinka) faylasha / faylalka adigoon weydiinin xaqiijin, taas oo naafo lagu noqon karo ama lagu shaqeyn karo Windows Explorer, Dolphin iyo PCManFM
Waxaan weydiiyay kooxda gnome muuqaalkaas waxayna yiraahdeen taasi waa naqshadda mana aysan ka fekereynin inay beddelaan.
In gnome waxaan ka furi lahaa feylasha kombiyuutarrada kale ee shabakadda maxalliga ah, taas oo aan ka shaqeynaynin KDE / LXDE oo ay la socoto Dolphin / PCManFM siday u kala horreeyaan, waa inaan u nuqul faylka feylka maxalliga ah si aan u adeegsado.
Si kastaba ha noqotee, on distros sida knoppix, PCLinuxOS (PCLOS) iyo xitaa on debian live-cd haddii ay suurtagal tahay, laakiin markii lagu rakibo on my pc, labadaba oo buuxa (xirmo meta) iyo midba mid (by aptitude or synaptic) guul la'aan. Xitaa waxaan rakibay oo aan habeeyay adeegyo badan oo shabakad ah (KIO, SMB, iwm).
Waxaan isku dayay in aan u isticmaalo Dolphin iyo PCManFam gnome waxaana jiray waxyaabo badan oo haray iyagoon awoodin in aan dhexgalo.
Laga soo bilaabo gnome3 aad ugama dhiirigalin isdhexgalka ama dalabka ilaha dardargelinta fiidiyowga, laakiin waa la isticmaali karaa, waxay furi kartaa faylasha shabakadda maxalliga ah laakiin wali ma weydiisato xaqiijin marka la tirtirayo / loo dirayo qashinka.
In KDE haddii ay ku weydiiso xaqiijin laakiin ma furi karo faylasha shabakada maxalliga ah
xFce waa wax fudud oo gnome ah, xoogaa waan daraaseeyay mana aanan jeclaysan, waxayna iga tagaysaa labada baahiyood
Waan jeclahay LXDE, laakiin ma furi karo faylasha shabakada maxaliga ah sidoo kale.
Sidee loo qaabeeyaa PCManFM ama Dolphin si ay u awoodaan inay u furaan / u isticmaalaan faylasha faylalka la wadaago ee shabakada maxalliga ah?
Sidee loo sameeyaa Nautilus inuu weydiisto xaqiijin markaad tirtirto faylasha ama faylalka?
Waxaan la joogayaa deegaanka daboolaya labadaas baahiyood
Xitaa waxaan bixiyaa xalka xitaa mid ka mid ah baahiyaheyga
Ku jawaab Antonio Gonzalez
Ka dib markii aan ka shaqeynayay gnome 2 ayaa soo maray kde 4, ikhtiyaarka gnome 3 ima uusan farxin gabi ahaanba, taas cagsigeeda waa ay i cabsiisay sidaa darteed waxaan ka faa'iideystay boodka ka soo bilaawday kde ilaa 5 waqtigaasna wuu i qabtay, waxaan u maleynayaa inuu yahay miiska saxda ah Xagga Deepin ma aanan awoodin inaan dheef shiido, waa qurux iyo wax laqaban karo laakiin waxaa ka maqan wax aanan aqoon oo Lxde iyo Xfce wali waxay umuuqdaan kuwo aasaasi ah oo cakiran.
Xaqiiqdii KDE 5 waa guuleystaha.
Ku jawaab Roberto Pérez
OO DHEX MALAY !!?
Ku jawaab Dinimixis
Linaro wuxuu hagaajiyaa waxqabadka Android 4.0.4 illaa 100%
Waraaq Furan oo ka socota Digia kuna socota Beesha KDE